Madaxweyne Gaas oo Gaalkacyo kula Kulmay Ganacsato Itoobiyaan ah – Radio Daljir
Agoosto 24, 2015 10:27 b 0
Isniin,,Ogoosto 24 ,2015(Daljir)_ Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 24-8-2015 hoygiisa magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug kula kulmay Wefdi balaaran oo ka socda Dalka Ethopia , kuwaasi oo isugu jira Ganacsato iyo masuuliyiin shirkad diyaaradeed dalkaasi laga leeyahay.
Wefdiga oo uu hogaaminayo Qumsulka Dawladda Ethiopia u fadhiya Puntland Madane Asmalaash ayaa waxaa casumay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland , waxaana kullankaasi ka qeyb-galay Wasiirka Ganacsiga Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle , Wasiiro iyo Ganacsato reer Puntland ah.
Ganacsatadaan ayaa Puntland u yimi sidii ay Dawladda Puntland ula saxiixan lahaayeen hashiis ganacsi oo baaxadleh , iyago badeecadahoda keeni doona Dalka halka kheyraadkeenana si sharciyeysan u geyn doonaan Dalka Ethiopia .
Hashiiska ayaa qeyb ka ah in Ganacsatadaan ay Kalluunka iyo kheyraadka kale ee Puntland kujira si sharciyeysan u geeyaan Dalka Ethiopia oo xiriir saaxiibtinimo uu ka dhaxeeyo Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa sheegay in uu si aad ah Puntland ugu soo dhaweynayo Ganacsatadaan oo Puntland u yimi sidii ay hashiis ganacsi oo balaaran ula geli lahaayen Dawladda Puntland.
Kullanka kadib ayaa Madaxweyne Gaas waxaa uu hoygiisa Qado sharaf ugu sameeyey dhammaan Ganacsatadaasi, halkaas ayeyna kuwada qadeeyeen.
Hashiiskaan Ganacsi ayaa waxaa uu noqon doonaan mid joogto ah oo ay ka faa’iideysanayaan Shacabka Puntland , waxaana uu kaalin weyn ka qaadanayaa horumarka baaxada leh ee ka soconaya Puntland.
Bulshada Diinsoor oo soo Dhaweeyay in Al-shabaab laga saaray degmadaas